Fiarakodia fiara an-trano hamidy! | RayHaber | raillynews
HomeIZAO TONTOLO IZAOEOROPEANINA33 FranceFiarakodia an-trano dia amidy!
09 / 01 / 2020 33 France, EOROPEANINA, IZAO TONTOLO IZAO, ANKAPOBENY, Highway, Headline, fiara
fiara an-trano cakma amidy
Fiara an-trano, toeram-pivarotam-barotra faharoa an'ny France miaraka amina dokambarotra sandoka 'amidy'. Ny mpivarotra dia mila 30 200 euros ny fiara (12 XNUMX TL). Nilaza ny mpivarotra fa lalana XNUMX kilometatra ny fiarany!
Araka ny tatitry ny Euronews'de Gizem Sade; Hanomboka faobe tamin'ny 2022. famokarana voalohany Torkia herinaratra ao an-toerana fiara, Frantsa lehibe indrindra, faharoa-tanana amin'ny sehatra miantsena hosoka ny leboncoin "dia amidy."
Mpampiasa tsy fantatra anarana ao amin'ny Leboncoin vao nanambara ny fivarotana ny fiara eo an-toerana, nampidirin'ny filoha Recep Tayyip Erdogan. Vehivavy marika TOGG marika 2020 mody milaza fa hanao ny lalana amin'ny 12 kilometatra, ny mpampiasa dia nizara ny dokambarotra tamin'ny kaonty tsy mitonona anarana.
FIVAROTANA NY daty 5 JANOARY
Sarin'ny fiara an-trano an'ity mpampiasa ity izay mizara ny dokambarotra sandoka dia mbola tsy nesorina tao amin'ilay tranokala. Ao anatin'ny fanambarana nambaran'ny daty 5 janoary dia nomena 30 Euros ny vidin'ny fiara.
Tiorkia Cars Initiative Group (TOGG), dia hanomboka ny famokarana tamin'ny 2022. Tiorkia fiara an-trano nampahafantarina tamin'ny 27 Desambra tao amin'ny lanonana natao tao Gebze. Ny antsipirian'ny famokarana fiara herinaratra an-trano dia nambaran'ny fanapahan-kevitry ny Filoha navoaka tao amin'ny Gazety ofisialy ny andro iny.
Ny fikolokoloana fikorontanam-bato no nipetrahan'ny Metro Golden Horn Pass tao Istanbul
Mbola mitohy ny fiatoana mankany amin'ny lalan'ny Metro Crossing Haliç
Handefa ny fiaran-dalamby haingam-pandeha ve ny Sinoa?
Izmir nanomana ny fiara an-toerana ... Iza no ao amin'ny komity?
Hmong malaza ao an-tokantrano Car ny finoana, raha tsy mbola natao tao Torkia
Fiara amin'ny lalana eny amin'ny Tram
Tiorkia voalohany indizena fiara elektrika